Ankazobe : Mpandraharaha notifirin’ny dahalo, efa nisy ny fisamborana - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversAnkazobe : Mpandraharaha notifirin’ny dahalo, efa nisy ny fisamborana
Fantatry ny maro eo amin’ny resaka fiompiana trondro i Lalaina, ilay mpandraharaha maty notifirin’ny dahalo.
Tsy niandry ela tokoa dia efa nisy sahady ny fisamborana taorian’ilay raharaha nahafaty an’i Lalaina, mpandraharaha eo amin’ny resaka trondro, notifirin’ny dahalo mpanakan-dalana teny Sambaina, Ankazobe, ny faran’ny herinandro teo.
« Mbola ao anatin’ny famotorana tanteraka izahay izao, ary azo lazaina fa mandroso tanteraka izany », hoy ny fanazavana azo avy amin’ny kaomandin’ny vondron-tobim-paritry ny zandary ao Ankazobe. « Noho izay anefa dia tsy afaka ny hilaza zavatra be dia be sao hanimba ny famotorana fa ny azo lazaina dia efa nisy aloha olona nosamborina », hoy hatrany izy. Hatreto, raha ny angom-baovao azo, dia tsy mbola fantatra mazava izay tena antony nahatonga ity famonoana ankitsirano ity. Vinavinan’ny rehetra ny hoe mety ho fifandisoan’olona angaha fa noheverin’ilay nahavanon-doza ho olon-kafa ity mpandraharaha ity tamin’izay fotoana izay.
Raha tsiahivina tokoa ny zava-nisy, ny harivan’ny zoma lasa teo, rehefa avy nitafatafa mahakasika ity taranja iray ankafiziny loatra sy amantaran’ny olona azy eny an-toerana ity, tamin’ny solombavambahoaka iray monina eny an-toerana, i Lalaina sy olona iray niaraka taminy dia namonjy ny lalana fodiany. Tsy lavitra ny toeram-ponenany intsony tamin’izay no nisy bandy iray nanakana izy ireo. Nijanona moa izy roa lahy ireto ary nanontany ity olona nanakana ity. Vantany vao tafajanona anefa dia navoakan’ilay olon-dratsy avy any ny basy ary nitaky ny vola avy hatrany ity farany sy nandrahoana azy ireo. Namaly moa ireto roa lahy fa tsy misy vola tany amin’izy ireo. Mety izay famaliana izay no nahatezitra ilay olon-dratsy ka nitifirany tsy am-pihambahana an’i Lalaina. Sakaosy nisy finday kosa no voalaza fa lasan’ilay olon-dratsy tany amin’ilay namany. Voa teo amin’ny tratrany ary nandoaka ny fon’ity mpiompy trondro ity ny bala, namoizana avy hatrany ny ainy teo no ho eo. Tokony ho tamin’ny enina ora sy sasany hariva tamin’izay fotoana izay. Tamin’iny fotoana iny ihany moa dia nidina teny an-toerana nanao savahao ny manodidina ny zandary, rehefa avy nampandrenesina, hikarohana ilay nahavanon-doza. Heverina araka izany fa tsy ho ela intsony dia ho voasambotra ity farany.